Ezekieri 27 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Rwiyo rwekuchema Tire, ngarava iri kunyura (1-36)
27 Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana wemunhu, imba rwiyo rwekuchema Tire,+ 3 woudza Tire kuti,‘Iwe mugari wepamagedhi egungwa,Wekutengeserana nemarudzi emuzvitsuwa zvizhinji,Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Iwe Tire wakataura kuti, ‘Ndakanaka zvinonwisa mvura.’+ 4 Pakati pegungwa ndipo pane nharaunda dzako,Uye vavaki vako vakakuvaka zvakanaka kwazvo. 5 Vakagadzira mapuranga ako ese nemijunipa yekuSeniri,+Uye vakatora musidhari kuRebhanoni kuti vakugadzirire bango rako rinoenda mudenga. 6 Vakagadzira zvekukukwasvisa vachishandisa mioku yekuBhashani,Uye divi rako rekumberi rakagadzirwa nemusaipresi wakashongedzwa nenyanga dzenzou, wakatorwa kuzvitsuwa zveKitimu.+ 7 Seiri rako nderejira rekuIjipiti rine mavara anoyevedza,Uye tende redenga rako rainge rakagadzirwa neshinda yebhuruu uye neshinda yepepuru yekuzvitsuwa zveErishaa.+ 8 Vagari vekuSidhoni neAvhadhi+ ndivo vaikukwasva. Waityairwa nevarume vako vane unyanzvi iwe Tire.+ 9 Varume vagara nebasa vekuGebhari+ uye vane unyanzvi ndivo vainama paunenge watsemuka.+ Vafambisi vengarava dzese dzemugungwa vaiuya nengarava dzavo muchitengeserana. 10 Varume vekuPezhiya, Rudhi, nePuti+ ndivo vaiva muuto rako, ivo varwi vako. Vakaturika nhoo dzavo nengowani mauri uye vakaita kuti uve nerunako. 11 Varume veAvhadhi avo vaiva muuto rako vainge vakamira pamasvingo ako kumativi ese,Uye varume vakashinga vairinda shongwe dzako. Vakaturika nhoo dzeraundi pamasvingo ako, kumativi ako ese,Uye vakaita kuti runako rwako ruwedzere. 12 “‘“Tashishi+ yaitengeserana newe nekuti waiva nepfuma zhinji.+ Vaikupa sirivha, simbi, tini, nemutobvu kuti vawane zvinhu zvako.+ 13 Vanhu veJavhani, Tubhari,+ neMesheki+ vaitengeserana newe, vachikupa varanda+ nemidziyo yemhangura kuti vawane zvawaitengesa. 14 Veimba yaTogama+ vaikupa mabhiza ehondo nemamwe ekushandisa pabasa nemanyurusi, iwe uchivapa zvinhu zvako. 15 Vanhu vekwaDhedhani+ vaitengeserana newe uye waiva nevanhu vaikutengesera zvinhu zvako pazvitsuwa zvizhinji, vachikupa nyanga dzenzou+ nematanda emuti wemushuma. 16 Edhomu yaitengeserana newe nekuti waiva nezvinhu zvizhinji. Vaikupa matombo anonzi tekoizi, shinda yepepuru, nemachira ane mavara anoyevedza, nemachira akanaka, nematombo ekorari neerubhi, kuti vawane zvinhu zvako. 17 “‘“Judha nenyika yeIsraeri dzaitengeserana newe, dzichikupa gorosi rekuMiniti,+ nezvekudya zvakanaka kwazvo, neuchi+ nemafuta nebharisamu+ kuti dziwane zvinhu zvako.+ 18 “‘“Dhamasiko+ yaitengeserana newe nekuti waiva nezvinhu zvizhinji nepfuma, vachikupa waini yekuHeribhoni neshinda yekuZahari.* 19 Vhedhani naJavhani vekuUzari vakakupa simbi inopfurika, kasiya,* netsanga dzinonhuhwirira kuti uvape zvinhu zvako. 20 Dhedhani+ aitengeserana newe achikupa machira ekugarira pamabhiza. 21 Wakaita kuti vaArabhu nemachinda ese eKedhari,+ avo vaitengesa makwayana nemakondohwe nembudzi vakushandire.+ 22 Vatengesi vekuShebha naRaama+ vaitengeserana newe. Vaikupa zvinonhuhwirira zvemarudzi ese zvakanaka kwazvo, matombo anokosha, negoridhe uchivapa zvinhu zvako.+ 23 Waitengeserana neHarani,+ neKane, neEdheni,+ nevatengesi vekuShebha,+ uye neAsuri,+ neKirimadhi. 24 Vaitengesa nguo dzakanaka pamusika wako, nemachira ebhuruu ekumonera akamendwa zvinoyevedza, nemakapeti ane mavara akasiyana-siyana, uye vaizvisunga zvese netambo. 25 Zvinhu zvawaitengeserana nevamwe zvaitakurwa nengarava dzeTashishi,+Zvekuti wakazadzwa nezvinhu uye wakaremerwa* uri pakati pegungwa. 26 Vaya vanokufambisa vakuendesa kune mafungu makuru egungwa;Mhepo yekumabvazuva yakuparadzira pakati pegungwa. 27 Pfuma yako nezvinhu zvako, nezvaunotengesa, nevanhu vese vanokufambisa, nevatyairi vako,Nevaya vanokunama paunenge watsemuka, nevanotengesa zvinhu zvako,+ nevarwi vako vese,+Vese* vakakwira mauri,Vachanyura pakati pegungwa pazuva rauchaparara.+ 28 Vatyairi vako pavachashevedzera, nyika dziri mumhenderekedzo dzichadedera. 29 Varume vese vanokwasva ngarava nevanodzifambisa, nevanoshanda mungaravaVachabuda mungarava dzavo vomira panyika. 30 Vachasimudza manzwi avo vokuchema zvinopisa tsitsi,+Vachizvimwaya guruva mumisoro, vachiumburuka mumadota. 31 Vachazvigera muparavara, vopfeka masaga;Vachakuchema vachirwadziwa, vachiridza mhere isingaiti. 32 Pavanenge vachikuchema, vachaimba rwiyo rwemariro uye vachaimba nezvako vachiti: ‘Ndiani akafanana neTire, iyo yangoti zii pakati pegungwa?+ 33 Zvinhu zvako pazvakasvika zvichibva mugungwa, wakafadza vanhu vazhinji.+ Pfuma yako zhinji nezvinhu zvawaitengesa zvakapfumisa madzimambo epanyika.+ 34 Iye zvino waparadzwa pakati pegungwa, mumvura yakadzika,+Uye wanyura, iwe nevanhu vako nezvinhu zvako zvese zvekutengesa.+ 35 Vagari vese vemuzvitsuwa vacharamba vakakuti nde-e vachishamisika,+Uye madzimambo emo achadedera nekutya,+ zviso zvavo zvichinetseka. 36 Vatengesi vari pakati pemarudzi vacharidza muridzo nezvinenge zvaitika kwauri. Kuguma kwako kuchangoerekana kwasvika uye kuchange kuchityisa,Uye hauchafa wakavapozve.’”’”+
^ Kana kuti “neshinda pfumbu dzakatsvukuruka.”
^ Uyu muti wakada kufanana nemuti unonzi musinamoni.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “wakakudzwa.”
^ ChiHeb., “Ungano yese.”